အစောင့်အရှောက်၊ အထီးကျန်နတ်ကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
Guardian: The Lonely and Great God (ဟန်းဂု: 도깨비; RR: Dokkaebi; lit. Goblin မှင်စာ) သည် ဂုန်ယူး၊ လီဒုံဝု၊ ကင်ဂိုအွန်၊ ယူးအင်နာနှင့် ယုစန်ဂျေတို့ ပါဝင်သော တောင်ကိုရီယားတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့အထိ tvN (တောင်ကိုရီးယား) မှ အပတ်စဉ် သောကြာနှင့် စနေနေ့တိုင်း ည ၈နာရီ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
စိတ်ကူးယဉ် ၊ အချစ် ၊ ဒရာမာ
"Stay With Me" ကို ပတ်ချန်ရိုး နှင့် Punch
၁၆+ ၃ (အထူးပိုင်းပြသမှု)
ဂင်းဂျယ် , တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ
Gangwon Province (တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ)
Gangwon-do , တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ
ကွီးဘက် မြို့တော်, ကနေဒါနိုင်ငံ
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆ (၂၀၁၆-၁၂-၀၂) – ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၁-၂၁)
၄ Original soundtrack
၄.၁ OST Part 1
၄.၂ OST Part 2
၄.၃ OST Part 3
၄.၄ OST Part 4
၄.၅ Charted songs
၆ ဆုများနှင့် ဇကာတင်ဆုများ
ကင်ရှင်(ဂုန်ယူး)သည် ဝိညာဉ်များကို စောင့်ရှောက်ရသော မှင်စာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ သေဆုံးသူဝိညာဉ်များကို အသက်နှုတ်ရသော အတိတ်လည်းမေ့နေသည့် သေမင်း(လီဒုံဝု)နှင့် အတူနေသည်။ သေသူများကို နောက်ဘဝကူးရန်အတွက် သူတို့နှစ်ဦး အတူပို့ပေးလေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့တွင် သူ့သတို့သမီး ဖြစ်လာမည့် ဂျီအွန်တက်(ကင်ဂိုအွန်)ခေါ်သော မိန်းကလေးနှင့် တွေ့ရသည်။ သူမမှာ သရဲမြင်နိုင်သော အစွမ်းနှင့် မွေးရာပါ အမှတ်ကြောင့် သရဲများက မှင်စာသတို့သမီးဟု မကြာခဏ ခေါ်ဝေါ်လေသည်။ 
ကင်ရှင်အဖြစ် ဂုန်ယူး၊ မှင်စာဟုလည်း သိ
၉၃၉ နှစ်ရှိ မသေနိုင်သော ကိုယ်စောင့်နတ် တစ်ဖြစ်လဲ မှင်စာသည် သူ၏မသေနိုင်သော ဘဝကို အေးချမ်းစွာ အဆုံးသတ်ပေးမည့် သူ၏သတို့သမီးလောင်း(သူအသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဓားကို ဆွဲနှုတ်ပေးနိုင်မည့် တစ်ဦးတည်းသောသူ)ကို ရှာဖွေနေ။
ဝမ်ယိုအဖြစ် လီဒုံဝု၊ သေမင်းဟုလည်း သိ
ရုပ်ချောပြီး အတိတ်မေ့နေသော သေမင်း
ကင်ရှင်နှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သော အကောင်းမြင် ပျော်ပျော်နေတတ်သည့် အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး၊ ကံစီမံရာအရ သရဲတစ္ဆေများကို မြင်နိုင် စကားပြောနိုင်သော သူသည် မှင်စာသတို့သမီးဖြစ်။
ကင်ဆန်ဟီးအဖြစ် ယူးအင်နာ၊ ဆန်နီဟုလည်း သိ
ဝမ်ယိုနှင့် ချစ်ကြိုက်သည့် တောက်ပဆွဲဆောင်မှု ရှိသည့် ကြက်ကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်။
ကင်ရှင်၏နောက်ပါ(ယူးမျိုးဆက်၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှာ မှင်စာ၏ သစ္စာခံဖြစ်ရန် ကတိပြုထားခဲ့)၊ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်ကြီး၏ပုန်ကန်လိုသော အမွေဆက်ခံသူ။
ကံကြမ္မာနတ်သမီး စံရှင်းအဖြစ် လီအယ်
အွန်တက်အဒေါ် ဂျီယွန်စုအဖြစ် ယမ်ဟေးရန်
အွန်တက်ဝမ်းကွဲအစ်ကို ပတ်ကျောင်ရှစ်အဖြစ် ဂျန်ယုံဂီ
အွန်တက်ဝမ်းကွဲအစ်မ ပတ်ကျောင်မီအဖြစ် ချွိုင်ရီ
The heirs (၂၀၁၃)နှင့် Descendants of the Sun(၂၀၁၆)ကို ရေးသားခဲ့သော ကင်အွန်စွတ်က ၎င်းဇာတ်လမ်းတွဲကို ရေးသားခဲ့သည်။ Descendants တွင် အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒါရိုက်တာလီအွန်ဘို့နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လက်တွဲလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ပထမဆုံးဇာတ်ညွှန်းဖတ်ပွဲကို ၂၀၁၆ ဩဂုတ် ၃၀ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်မြို့၊ စန်ဂံရပ်ကွက်၊ နုရီအိပ်မက်စကွဲယားတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။၊ ဆဂွတ်ရိုက်ကွင်းများကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြောက်ဂျော်လာခရိုင်၊ ဂင်းဂျယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၂ ၌ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သင်္ချိုင်းရိုက်ကွက်များကို အောက်တိုဘာ၌ ကနေဒါ၊ ကွီးဘက်မြို့တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ 
OST Part 1ပြင်ဆင်
OST Part 2ပြင်ဆင်
OST Part 3ပြင်ဆင်
OST Part 4ပြင်ဆင်
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ တွင် ပြုလုပ်သော ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ မိတ်ဆက်ပွဲ ၌ ဂုန်ယူး ၊ လီဒုံဝု နှင့် ကင်ဂိုအွန်တို့အားတွေ့မြင်ရစဉ်
အောက်ပါဇယားတွင် အပြာဂဏန်းများသည် အနိမ့်ဆုံးကြည့်ရှုနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး အနီဂဏန်းများသည် အမြင့်ဆုံး ကြည့်ရှုနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
2017 First Brand Awards Special Award Guardian: The Lonely and Great God ဆုရရှိ
11th Korean Cable TV Awards Best Drama ဆုရရှိ 
Best OST Ailee (I Will Go to You Like the First Snow) ဆုရရှိ
Rising Star Award ယုစန်ဂျေ ဆုရရှိ
VOD Broadcasting Guardian: The Lonely and Great God ဆုရရှိ
5th Annual DramaFever Awards Best Actor ဂုန်ယူး ဆုရရှိ 
Best Supporting Actor လီဒုံဝု ဆုရရှိ
Best Supporting Actress ယူးအင်နာ ဆုရရှိ
Best Couple ဂုန်ယူး နှင့် ကင်ဂိုအွန် ဆုရရှိ
Best Melodrama Guardian: The Lonely and Great God ဆုရရှိ
53rd Baeksang Arts Awards Baeksang Arts Awards Grand Prize ကင်အွန်စွတ် ဆုရရှိ 
Best Drama Guardian: The Lonely and Great God ဆန်ကာတင်
Best Director Lee Eung-bok ဆန်ကာတင်
Best Screenplay ကင်အွန်စွတ် ဆန်ကာတင်
Best Actor ဂုန်ယူး ဆုရရှိ 
Best Actress ကင်ဂိုအွန် ဆန်ကာတင်
12th Asia Model Awards Asia OST Popularity ပတ်ချန်ရိုး , Punch (Stay With Me ) ဆုရရှိ
Brand of the Year Awards Actor of the Year ဂုန်ယူး ဆုရရှိ
12th Seoul International Drama Awards Outstanding Korean Drama OST Ailee (I Will Go to You Like the First Snow) ဆုရရှိ 
1st Soribada Best K-Music Awards Best Hallyu OST ဆုရရှိ 
10th Korea Drama Awards Korea Drama Awards Best Drama Guardian: The Lonely and Great God ဆုရရှိ 
Best Production Director Lee Eung-bok ဆန်ကာတင်
Best Screenplay ကင်ဂိုအွန် ဆန်ကာတင်
Top Excellence Award, Actor လီဒုံဝု ဆန်ကာတင်
Top Excellence Award, Actress ကင်ဂိုအွန် ဆန်ကာတင်
Excellence Award, Actress ယူးအင်နာ ဆန်ကာတင်
Best New Actor ယုစန်ဂျေ ဆုရရှိ
Best Original Soundtrack Crush (Beautiful) ဆန်ကာတင်
ဆိုးယူ (I Miss You) ဆန်ကာတင်
Star of the Year Award ယုစန်ဂျေ ဆုရရှိ
Popular Character Award ကင်အွန်စွတ် ဆုရရှိ
Park Kyung-hye ဆုရရှိ
3rd Fashionista Awards Best Fashionista – TV & Film Division ဂုန်ယူး ဆန်ကာတင်
Global Icon လီဒုံဝု ဆန်ကာတင်
2nd Asia Artist Awards Best OST Award Ailee (I Will Go to You Like the First Snow) ဆုရရှိ 
22nd Asian Television Awards Best Drama Series Guardian: The Lonely and Great God ဆန်ကာတင် 
2017 Mnet Asian Music Awards Asian Music Awards Mnet Asian Music Award for Best OST ပတ်ချန်ရိုး (Exo ),Punch (Stay With Me) ဆန်ကာတင် 
Crush (Beautiful) ဆန်ကာတင်
Ailee (I Will Go to You Like the First Snow) ဆုရရှိ
9th Melon Music Awards Song of the Year ဆန်ကာတင် 
Best OST Award ဆုရရှိ
Kakao Hot Star ဆန်ကာတင်
2018 32nd Golden Disc Awards Best OST Award Ailee (I Will Go to You Like the First Snow) ဆုရရှိ 
27th Seoul Music Awards Best OST Award ဆုရရှိ 
↑ 'Guardian' -- not 'Goblin'။ Kpop Herald (December 7, 2016)။
↑ Special episodes reveal ‘Guardian’ behind the scenes။ The Korea Herald (February 5, 2017)။
↑ "'도깨비', 1·2회 90분 특별 편성" (in ko)၊ Star E Daily။ December 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ E.၊ Maolen။ "tvN's 'Goblin' starring Gong Yoo, Kim Go-Eun begins test shooting"၊ 2016-08-31။
↑ "[단독 김고은, 공유의 여자 된다..김은숙 신작 주인공]"။
↑ "Gong Yoo confirmed for 'Descendants of the Sun' writer's next project! | allkpop.com"။
↑ by (2016-11-29)။ This 6-minute-long Goblin preview is everything!။ Dramafever.com။ 2016-12-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "공유, 김은숙 차기작 ‘도깨비’ 출연 확정…11월 tvN 첫방송 [공식입장]"။
↑ [단독 김고은, 공유의 여자 된다…김은숙 신작 주인공] (in ko-KR)။
↑ "tvN 측 "육성재·유인나 '도깨비' 출연 확정"(공식입장)"၊ 2016-08-29။
↑ Kim၊ E. (2016-08-29)။ Yook Sungjae And Yoo In Na To Join Gong Yoo And More In tvN Fantasy Drama။
↑ 극구 부인하던 tvN ´도깨비´, 결국 ´태후´ 이응복 PD가 연출 - 일간스포츠။ Isplus.live.joins.com (2016-08-29)။ 2016-12-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Descendants' writer, director team up for new fantasy piece။ The Korea Herald (2016-11-22)။ 2016-12-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Overseas K-drama Filming Sends Goblin to Canada and Man to Man Heads to Hungary | A Koala's Playground။
↑ "Le "Brad Pitt" de la Corée du Sud en tournage à Québec | David Rémillard | Cinéma" (in fr-CA)။
↑ ICI.Radio-Canada.ca၊ Zone Arts -။ Tournage d’une méga série sud-coréenne à Québec (in fr-ca)။
↑ AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu (in Korean)။ AGB Nielsen Media Research။ June 1, 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 11, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- '도깨비', 최고의 드라마..시청률·화제성·해외반응 다가졌다 (in Korean)။ OSEN (January 23, 2017)။
↑ TNMS Ratings (in Korean)။ Naver။ February 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ TNMS Ratings (in Korean)။ Naver။ February 5, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘Goblin’ Sweeps the 2017 Korea Cable TV Awards။ Korea Daily (10 March 2017)။
↑ Announcing the winners of the 5th Annual DramaFever Awards။ DramaFever (April 27, 2017)။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ ‘Guardian,’ ‘The Handmaiden’ win big at Baeksang Awards။ The Korea Herald (May 4, 2017)။
↑ [SDA 2017 에일리, 한류 주제가상.."박보검 다음 작품도 부르고파"] (in Korean)။ osen (September 7, 2017)။ September 7, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "'도깨비' 첫눈효과 여전" 에일리, OST상 주인공 (September 20, 2017)။ September 20, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Son Ye-ji။ "한석규·김상중·차인표·김영철·최민수, '2017 KDA' 대상 후보 5人 확정 (공식)" (in ko)၊ TenAsia၊ September 27, 2017။ October 2, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Noh Gyu-min။ "김상중, 대상 "5년마다 수상…그것이 알고싶다" 소감… '도깨비' 작품상(코리아드라마어워즈)" (in ko)၊ TenAsia၊ October 2, 2017။ October 2, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [★포토에일리, '베스트 OST상 받았어요'] (November 15, 2017)။ November 15, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "22nd Asian Television Awards 2017 nominees announced"၊ Asian Television Awards။ November 8, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2017 MAMA Announces Nominees + Voting Begins (October 19, 2017)။ October 19, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "2017 Melon Music Awards Announces Nominees For Category Awards + Voting Begins"၊ Soompi။ November 13, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Winners Of The 32nd Golden Disc Awards Day2(January 11, 2018)။ January 11, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Winners Of The 27th Seoul Music Awards။ Soompi (25 January 2018)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစောင့်အရှောက်၊_အထီးကျန်နတ်ကြီး&oldid=503640" မှ ရယူရန်
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။